त्यो अनुहार !!!!!!!
_____ 3936 days ago
OBAMA 3936 days ago
crazy_love 3935 days ago
Geology Tiger 3935 days ago
Rahuldai 3935 days ago
atomic 3935 days ago
OBAMA 3935 days ago
Hasaune Paree 3935 days ago
mulmiz 3935 days ago
Rahuldai 3932 days ago
OBAMA 3932 days ago
super007 3932 days ago
serial 3932 days ago
baire 3932 days ago
Rahuldai 3931 days ago
Geology Tiger 3931 days ago
mulmiz 3931 days ago
ritthe 3931 days ago
Stiffler 3931 days ago
timi_mero_sathi 3930 days ago
Visitor from US is reading त्यो अनुहार !!!!!!!
Visitor from DE is reading Where are these Nepali Celebrities
Visitor from US is reading अमेरिका रिटर्न्ड सुपुत्र
Visitor from US is reading 5000 friends
Visitor from SG is reading where are prachandas children?
[VIEWED 17908 TIMES]
Posted on 01-13-11 10:37 AM Reply [Subscribe]
जिन्दगीको यो मोड सम्म आइपुग्दा असंख्य अनुहारहरु भेटिए, धेरै मेटिए। अनेक व्यबहार झेलिए, केही मा जेलिएं । एउटा अनुहार म ३० बर्ष देखी बाटो चौबाटोहरुमा खोजी रहेको छु ।
आज फेरी त्यही पुरानो कालो दिनको स्‍मृतिपुन्जमा पुगेको छु । कुरो ५ क्लास पढ्दा तिर को हो । पिताजीले अंश त्यागी स्वतन्त्र जिन्दगी रोज्नु भएको धेरै दिन भाको थिएन । बाबाले काम गर्ने बैंक मा डकैटी भए पछी बाबाले जागिर छोड्नु भयो । चाँदिका वर्तन बनाउने पुरानै पेशालाई निरन्तरता दिन पूर्बाधार बनाइ भर्खर कामको थालनी गर्नु भएको थियो । नयाँ काम को सुरुवाती लगानी ( समय र अर्थ )मा घरको भकारी भिकारीमा परिणत भैसकेको थियो । समय अनेक दृष्‍टिले कष्टपूर्ण थियो । कुनै चमत्कार बिना त्यो स्थितिबाट मुक्ती मिल्ने संभावना न्यून थियो ।
चिसो चुल्हो बाल्नै पर्‍यो । खाली पेटहरुलाई माड ले टाल्नै पर्‍यो। आम्दानी भने केही थिएन ।
बिहान सबेरै उठ्थें । नेपाली कागजको क्यालेण्डर तथा अन्य सजावटका पोस्टरहरुमा रङ्ग भर्थें । एक पाटो रङ्ग भरेकोको १ रुपैया पाइन्थ्यो । रङ्ग भरेर दङ्ग हुन्थें । सधैं हुने काम थिएन। जती हुन्छ मन लगाएर गर्थें । त्यो पैसाले ६ जनाको माड बन्दैन थ्यो ।
घरमा एउटा पुरानो लुगा सिउने कल थियो । हाम्रो टोलमा एउटा परिवारले ढाकाको खास्टोमा किनारा लाउने काम गर्थे । आमाले त्यही काम मागी किनारा सिउने काम थाल्नु भयो । एक खास्टो को पच्चिस पैसा । कागज मा रङ भर्ने काम न भाकोबेला म नि सिउने गर्थें । जसो तसो चिसो दाउरो बल्थ्यो । लड्डु विद्यार्थी भाकोले पढाई को कुनै चिन्ता थिएन । चिन्ता थियो त भात को ।
यसरी जिन्दगीहरु घिस्रिरहेका थिए । त्यती बेला दसैंको उपलक्षमा १५ दिन स्कूल बिदा । घटस्थापना अघिल्लो दिन शनिबार थियो । शनिबार बाबाले काम गर्ने आरानमा आगो फुक्ने, रसान मा सहयोग गर्ने काम गर्थें । त्यो दिन पनि म बाबा संगै ज्यासलमा ( काम गर्ने ठाम )थिएं ।
एक जना ४०-४२ बर्षको झन्डै एस् फीट अग्लो ब्यक्ती ले ढोका ढक्ढक्याए । ढोका खोलें । खैरो रङको दौरा सुरुवाल, कालो भात गाउंले टोपी, इस्टकोट र कपडा को जुता लाएको ब्यक्ती देखें ।
"किशन दाई को घर यही हो,"नेवारीमा सोधे ती अपरिचित ब्यक्तीले । मैले हो भनें ।
काँधमा ल्हासाको झोला भिरेका ब्यक्तीले पिताजिलाई भेट्नु पर्ने काम बताउदै थियो .................................................................
Posted on 01-13-11 5:23 PM [Snapshot: 310] Reply [Subscribe]
म त अनुहार खोज्दा खोज्दा हैरान, का लुकाएर राख्या छ ह त्यो अनुहार? अनुहार को प्रतिक्च्य्या मा
Posted on 01-14-11 1:10 AM [Snapshot: 465] Reply [Subscribe]
राहुल दाई, यो त टि भि को सिरिअल भन्दा नि थोरै भो नि । लौ,अर्को पनि पस्की हाल्नु पर्‍यो।
Posted on 01-14-11 8:49 AM [Snapshot: 551] Reply [Subscribe]
Posted on 01-14-11 8:54 AM [Snapshot: 556] Reply [Subscribe]
धेरैले शायद शब्द बुझे पनि अर्थ बुझ्दैनन् होला, अथवा बुझ्ने टन्टो नै गर्दैनन्, हृदयस्पर्शी भनेको हृदयलाई स्पर्श गर्ने अर्थात मनलाई छुने, मनको दुखेसोमा आराम महसुस गराउने हो; ठुल्दाइको यो कथा पनि सधैं झै हृदयस्पर्शी छ
Posted on 01-14-11 11:02 AM [Snapshot: 610] Reply [Subscribe]
पिताजीले त्यो अपरिचित अनुहार लाई ज्यासल भित्र आउनु भन्नु भयो । नमस्कार गर्दै " म पंडित अर्जुन देब" , उनले आफ्नो छोटो परिचय तेर्साए ।
" यह, के कती कारणले मलाई खोज्नु भएको क्या रे " बाबाले जिज्ञासा राख्नु भयो ।
"किसन दाई , तपाईं भर्खर सगोलबाट छुट्टीएर यो घरमा आउनु भएको रे । बैंक को जागिर नि छोड्नु भयो रे । नयाँ काम नि राम्रो सँग सुरु भा छैन रे । बडा मुश्किल समय छ तपाईं को ।"
एक एक घट्ना दुर्घट्ना को सबिस्तार बयान गर्दै थिए । मानौं त्यो अपरिचित ब्यक्ती भित्रिया हुन, हर एक यथार्थ सँग परिचित् । यो कुनै सामान्य मान्छे हैन। बसन्तपुर डबलिमा छिमेकी राष्ट्रबाट आएकाहरुले "ईन्द्रजाल" जादु देखाउदा जसरी म अवाक भएको थिएं त्यसरी नै हेरेको हेरै भएं ।
बाबाले अझै त्यो रहस्यमय ब्यक्ती माथि विश्वाश गर्नु भएन । तपाईंलाई यहाँ कसले पठाको ? अनी यी सब कुरा कसरी थाहा पाउनु भयो ?
एक छिन अक्मकिए उनी।
"मलाई ठमेलको पूर्णमान साहु ले " मेरो साथी लाई अप्ठेरो परेको छ , सहयोग गर्नु " भनेकोले घर खोज्दै आएको । म तान्त्रिक हुँ, मलाई तपाईं को सब दु:ख कष्ट थाह भयो अन्तरद्रिष्टी ले हेर्दा । निकै अन्यायमा पर्नु भाको रहेछ, मैले सहन सकिन र सहयोग को लागि आएको । "
डुब्ने को त्यान्द्रो साहरा हुन्छ भन्छन्। पूर्णमान साहु, बाबाको पुरानो साथी, सधैं भलो चिताउने ब्यक्ती। बाबाको मन मा शायद कुनै देबदूत दुखियारीको घर मा पठाएको जस्तो आभास भयो होला त्यती बेला ।
माथि कोठामा पाल्नु होस् , त्यताइ कुरा गरौला भनेर तान्त्रिक महोदयलाई माथि लग्नु भयो । म ज्यासल बन्द गरी माथि उक्लें ।
चोटामा आमा, दिदी , दाई सबै भेला भैसकेको थियो ।
तान्त्रिक महोदयले तिब्बतियन झोलाबाट एउटा " बज्र " निकाल्नु भयो र सबलाई छोएर हेर्नु भन्नु भयो । सबले छोए, केही अनौठो लागेन ।
"केही फरक महशुस गर्नु भयो ?? "
"अहं" सप्पैले एकै स्वर मा भने ।
एक छिन त्यो बज्रलाई केही मन्त्र फुके जस्तो गर्नु भयो र दाई लाई फेरी स्पर्श गर्नु भन्नु भयो । दाई ले छुन के भ्याउनु भएको थियो, हुत्याइ दिनु भयो । करेन्ट लाग्यो रे ।
मलाई छुन डर लाग्यो । हच्किएं । केही हुंदैन बिस्तारै छुनु भनी हौस्याए पछी , डराइ डरै छोएं । २२० भोल्ट को करेन्ट लागे जस्तो झट्का दियो ।
बातावरणमा सन्नाटा छयो । तान्त्रिक महोदयले अर्को एउटा चिज निकाल्नु भयो चिन्तामणी झोला बाट । सबैलाई देखाएर मुट्ठिमा कसी " फू" के गर्नु भाथ्यो , त्यो फूलको पत्रहरुको रङ फेरियो ।
सबलाई लाग्यो, यो त साह्रै जान्ने तान्त्रिक बाबा रहेछ ।
पिताजीले सोध्नु भयो "अब भन्नुस् पंडित जी , के गरे यी दु:खका दिन हट्छ । "
तान्त्रिक महोदयले खोजेको नै त्यही थियो ।
"तपाईं र तपाईंको घरलाई हल्चोकको भैरब को दशा, टिका भैरबको दशा, शनि ग्रह को वक्र दृष्‍टि छ । ग्रह शान्ती गरे सब ठीक हुन्छ । समय एक दम उपयुक्त छ । भोली घटस्थापना , शुभ साइत छ । भोली देखी नै शान्ती पूजा गरे , दसैं सम्म मा तपाईंहरु को सब ठीक हुन्छ ।"
कुरो सत्य जस्तो लाग्नु स्वाभाबिक थियो ।
तपाईंहरुले केही गर्नु पर्दैन , सब म गर्छु । एक माना चोखो चामल ढोक गरेर दिनुस् र ।
त्यो " र "मा अर्थोक थियो नै ।
"र ५ सय रुपैया दिनुस् , हल्चोक मा हाँस भोग दिनु पर्छ, टीक भैरब त्यो........................। सब गरेर त्यती जती त खर्छ लाग्छ ।"
५ सय ? घरको चुल्हो मुश्किलले बल्ने घरमा ५ सय हुने कुरा भएन । बाबाले आमा लाई, आमा ले दाई लाई अनी दाई ले मलाई हेर्नु भयो ।
"आमाले भन्नु भयो , ५ सय त अली बढी भएन र ? हामीलाई यहाँ दिनको छाक टार्न त मुश्किल भैराखेको बेला, कहाँ बाट ल्याउने ? अलि कम मा चल्ने भए सरसापट बाट भए नि मिलाउनु हुन्थ्यो । "
"हो त तपाईंहरु को मर्का मैले बुझेको छु । सके सम्म काम खर्च गरौला , अहिले ३०० दिनुस् , पुगेन भने पछी हिसाब गरौला । १५ दिन पछी हेर्नुस् तपाईं को घरको कायापलट हुन्छ । ३०० रुपैया को चिन्ता न लिनुस् । पंडित अर्जुन देब ले धेरैलाई यस्तो अवस्थाबाट पार लगाइ सकेको छ ।"
पैसा को जोरजाम गर्ने सल्लाह को लागि दाई, बाबा र आमा निस्कनु भयो माथिल्लो कोठामा । दिदी चिया बनाउन निस्कनु भयो । कोठामा तान्त्रिक र म मात्र थिए। अली अली डर लागि रहेको थियो ।
"कती क्लास भाई ?"
"५ क्लास "
राम्रो सँग पढ्नु , ठुलो मान्छे बन्नु पर्छ ।
तान्त्रिक बाबाले यसरी सम्झाइ रहे कि उहाँ मेरो आफ्नै काका ठुलबुवा जस्तो ।
यत्तिकै मा पिताजीले पैसा लिएर आउनु भयो । त्यती बेला को ३०० रुपैया भनेको सुब्बाको एक महिने तलब बराबर थियो । कसरी जोड्नु भयो त्यति बेला मेरो सरोकार को बिषय रहेन ।
पैसा र चामल पोको पारी, "सप्पै पूजा आजा पञ्चमी सम्म सकिन्छ, सके षस्टमी , ढिलो भए फूलपाती सम्म मा , प्रशाद र जल लिएर आउछु । केही भएर आउन सकिन भने मलाई यो ठेगाना मा संपर्क राख्नु " भनेर सानो कागज मा ठेगाना लेखेर दिनु भयो र चिया नै न खाइ बिदा हुनु भयो ।
Posted on 01-14-11 11:40 AM [Snapshot: 647] Reply [Subscribe]
testo!!!!!...... aye daiba!! 300 tyo timaa ta dherai po ho ta???...
Posted on 01-14-11 12:18 PM [Snapshot: 675] Reply [Subscribe]
राहुल दाई, तान्त्रिक ले ठग्यो जस्तो छ, हैन र ?
Posted on 01-14-11 1:36 PM [Snapshot: 727] Reply [Subscribe]
कठै, कस्तो माया लाग्दो...दशैंको मुखमा दशा होला जस्तो
Posted on 01-14-11 9:46 PM [Snapshot: 842] Reply [Subscribe]
त्यो तान्त्रीक, छिकेमी मुलुकको त होईन है ? नेवारीमा एउटा उखान याद आयो " सिम्ह मर्साँ झिम्ह नेपामी नई"
Posted on 01-17-11 10:25 AM [Snapshot: 1049] Reply [Subscribe]
त्यो अनुहार................. .
तान्त्रिक गए पछी एकाएक सबको मुहार उजेलियो । मनोबैज्ञानिक असर होला । दु:खका दिन फेरिने भए, सुख के हो हेरिने भए ।
घटस्थापनाको दिन यसपाली खुशी सहित को जमरा राखी पूजा गर्नु भयो बिधिपूर्बक। म कान्ता डबडब बजाउदै रमाएं । बाबाले एक केजी मासु ल्याउनु भयो । पहाँचह्रे भ्वय पछी मासु खाएको याद थिएन मलाई । अब सधैं चिसो चुल्हो रहन्न हाम्रो भन्छामा । रहर लागेको बेला माछा मासु खाने दिन आउछ । मेरो अबोध मनमा त्यही गुन्जिरहेको थियो ।
नेपाली कागजमा रङ भर्ने काम जारी थियो । दिदी र आमा ढाका को खास्टो सिउनेकाम मा ब्यस्त । पिताजी पनि केही न केही चांदिका वर्तन बनाउन ब्यस्त, दाई पिताजीलाई सघाउन । लाग्यो जिन्दगीले अब कोल्टे फेर्न फेर्न लागि रहेछ । रेडियोमा मालश्रीको धून हाम्रै लागि बजाएको जस्तो, बजी रहन्थ्यो । दसैं आएको सुखद सन्देश दिदै।
पञ्चमीको दिन पचली भैरबको यात्रा। मध्यरातमा पचली भैरबको घ्याम्पो हेर्न गैयो, अलि अलि शरदिय चिसो रात छिचोल्दै । षष्टमी भयो । लाग्यो आज त त्यो तान्त्रिक पर्साद र जल लिएर आउछ । दिन भरी बाटो हेरें , आएन । सके षष्टमी न सके फूलपातिमा आउछु भन्थ्यो, भोली आउँला नि भन्दै त्यो रातको भात खाइयो ।
फूलपातीको नि साँझ ढल्यो, पंडित अर्जुन देब आएन । अब भने केही दिन देखि फुलेका खुशीका फूलहरु एकाएक झरे । आशाहरु भकाभक मरे । महाअष्टमी, कुछी:भ्वय मनाउनै पर्‍यो । जोरजाम मा बाबा र आमा लाग्नु भयो । सघाउने हामी भाराभुरी थियौ नै ।
"त्यो तान्त्रिक भनाउदा ठग जस्तो लाग्या थ्यो पहिला नै, तर हाम्रो घरको आगं थाहा पाएको ( सबै कुरा ) मान्छे अनी पूर्णमानको नाउं लिए पछी शंका गर्ने ठाउँ रहेन ।"
बबाले आफ्नो शंका पोखिहाल्नु भयो । " आउछ होला दसैं सके पछी " आमामा अझै आश जिवित रहेछ ।
पूर्णमान ले पठाको हो हैन कन्फर्म गर्नु पर्ने तर फोन छैन त्यसको घर मा । जे भए नि थप ३०० रुपैया ऋण ठगले थपेर गयो । बाबाको मनले अर्जुन देबलाई ठग नै मानु भैसकेको रहेछ । हाम्रो बालक मस्तिष्कमा यस्ता ठग हो वा हैन छुट्याउने संयन्त्रको बिकास भैसकेको थिएन ।
दसैं सकियो अर्थात दसैं मनाइयो। हामी दाजुभाइ र दिदी बहिनीमा यति ज्ञान चाहीं थियो कि घरको ढुकुटी खाली छ र नयाँ लुगा लाउने सपना हाम्रो पहुंच बाहिरको कुरा हो । लट्टाइं धागो र चङ्गा को कुरा नि कहिलेइ गरेनौं। छाना माथि बसेर अरुले उडाको लडाको रङ्गी बिरङ्गी चङ्गा चेट हेर्दै रमायौं ।
दुई दिन दुई रातमा स्कूले ले दसैंको छुट्टी को लागि दिएको होमवर्क सक्याएं । स्कूल सुरु भयो । दसैं सकेको को एकहफ्ता बित्यो । अझै अर्जुन देब आएन ।
शनिबार ब्यान मैले आमालाई भनें " त्यो पंडित ले ठेगाना देको छ, खोज्न जाऔं " । आमाले हुन्छ अहिले नै जाउं भन्नु भयो र हामी अर्जुने देब ले दिएको ठेगाना तर्फ लाग्यौं । कोपुण्डोल हनुमानस्थान भन्दा केही माथि, कान देबतास्थान बन्दा वर, बीचमा एउटा कुमारी मन्दिर भाको गल्ली भित्र कुमारी अप्टिकल भन्ने चसमा पसल सँग जोडीएको घरमा डेरा भनेको थियो । अर्जुन देबले बताए अनुसार को घर भेटियो । अर्जुन देब चाँही भेटिएन । बुझ्दा त्यस्तो हुलिया भाको मान्छे त्यो घरमा मात्र हैन टोल मै कहिले न बसेको न आएको पत्ता लाग्यो । निराश भएर फर्क्यौं । अब भने आमाले पनि तान्त्रिकलाई ठग नै मान्नु भयो ।
त्यस दिन देखी त्यो अनुहार हरेक भिडमा खोज्दै छु, अझै खोज्दै छु म । ३०० रुपैया ठगेको अपराधको लागि हैन । कसको ईशारामा यस्तो गरेको तैले भनेर कठालो समात्नु छ । बबाले जिन्दगीमा कसैको कुभलो चिताएको थाहा थिएन । कुन शत्रु को माध्यम बन्यौ ए पंडित -सोध्ने इच्छा अहिले सम्मा अधुरो नै रह्यो ।
त्यो घट्ना पछी हाम्रो परिवारमा के कत्ती बिपत्ती आइपर्‍यो । के कती दु:ख कष्ट ले तहस नहस पारे तलको लिन्क ( पिताजीको सुनको तक्मा )मा उल्लेख पहिले नै गरी सकेको छु ।
(पिताजीको सुनको तक्मा को लिन्क ( पुराना मित्रहरुले पढि सक्नु भाकै होला, नयाँ मित्रहरुमा एक चोटि पढि दिन हुन आग्रह गर्दछु )
Last edited: 17-Jan-11 10:32 AM
Posted on 01-17-11 11:21 AM [Snapshot: 1094] Reply [Subscribe]
दाई को कथा ले फेरी मन छोयो, अर्जुन देव लाई भेटेर मर्मत गर्न मन लाग्यो मलाई पनि।
Posted on 01-17-11 1:55 PM [Snapshot: 1172] Reply [Subscribe]
राहुल दाईको यो कथा पनि नीकै भावनात्मक लाग्यो, उत्क्रिष्ठ सैली, मन छुने घटनाक्रम अनि जीवन संग अति नजिक रहेको कथाबस्तु नै तपाईका हरेक लेखको बिशेषता हो र येस्पली पनि यो लेखमा त्येही सम्पूर्ण गुणहरु पाए | तपाईको दसौ तक्मा पाउने दौडको लागि अहिले नै अग्रिम सुभकामना!!!
Posted on 01-17-11 2:19 PM [Snapshot: 1191] Reply [Subscribe]
त्यो अनुहार भेट्यो भने दाई भाई मिलेर धुलाउनु पर्छ
कथा को त के कुरा गराइ भो र - मार्मिक छ - ब्राभो ठुल्दाइ
Posted on 01-17-11 2:27 PM [Snapshot: 1201] Reply [Subscribe]
La tyo godne haru maa ma ni saamil chhu hai ... Tyesto sita ni thagne ho ta ...
Posted on 01-18-11 9:35 AM [Snapshot: 1342] Reply [Subscribe]
कथाको समाप्ती मै सबै मित्रगणमा एकमुष्ठ धन्यवाद ज्ञापन गर्ने बिचारले बीचमा धन्यवाद ज्ञापन गरिन, क्षमा चाहन्छु ।
बैरे- आज को दिन सम्म त्यो पाखण्डी जिउदै रहेको होला र ?? शैतानहरु छिट्टै मर्दैनन रे भन्छन। जिउदो भेटिए खबर गरौला ।
लहरे - राम धुलाई श्याम धुलाई गर्न मान्छे त भेटिनु पर्‍यो नि ? मखुला ??
सुपर ००७ - धन्यवाद, तपाईंहरु कै सदभाव मा मनको भाव पोख्ने गरेको छु । जे देखें जे भोगें , त्यही लेखें ।
ओबामा- मन छुन सकेकोमा सन्तोष लागेको छ। अर्जुन देब भन्दा नि अर्जुन देब लाई पठाउने दुष्ट को खोजिमा छु ।
मुल्मी- त्यो तान्त्रिक छिमेकी देश को हैन, छिमेकी जिल्ला को चाँही हुन सक्छ ।
हसाउने परी- दसैं को मुख मा त केही हैन, त्यो घट्ना पछी हाम्रो घरमा बिपत्ती लाइन लाएर आए, अझै त्यसको असर बाँकी छ । हेर्नु होस् पिताजीको सुनको तक्मा ।
एटोमिक- ३०० रुपैया सुब्बा साहेबको एक महिनाको तलब हुन्थ्यो, सुन एक तोलाको ६०० देखी ७०० थियो त्यती बेला ।
जीते- धन्यवाद हौसला दिनु भएकोमा । अझै लेख्न सिक्दै छु । आफुले भोगेको दु:ख पोख्दा मार्मिक हुनु स्वाभाबिक हैन र ?
क्रेजी- कथा छिट्टै समाप्न गरी दिएं ।
धर्के - अब त चिन्नु भो होला अनुहार ? कतै तपाईं को छिमेक मा त छैन त्यो ? होसियार !!!!
दमयन्ती - धन्यबाद ।
चिसोमान - धन्यवाद । समय दिनु भएकोमा।
अन्य सबै पाठक मित्रहरुमा अमुल्य समय खर्चेर पढिदिनु भएकोमा हार्दिक आभार ।
Posted on 01-18-11 10:02 AM [Snapshot: 1362] Reply [Subscribe]
मिठो कथा सुनाउनु भएकोमा धन्यवाद ठुल्दाइ, फेरी पनि यस्तै यस्तै खुराक चाख्न पाइयोस
Posted on 01-18-11 10:11 AM [Snapshot: 1347] Reply [Subscribe]
ठुल्दाई एउटा अनुरोध,
साझा र ठुल्दाईको मुहार पुस्तकबाट बन्चित मेरा शुभजिन्तकहरु माझ मेरो खेस्रा मार्फत हजुरको आत्मबृतान्त पस्किन चाहन्छु
अनुमति छ दाई ?
Posted on 01-18-11 11:43 AM [Snapshot: 1406] Reply [Subscribe]
धेरै दिन पछी ठुल्दाइको कथा पढ्न पाइयो ! धन्य भईयो प्रभु ! अब अरु पनि लेख्दै गरौ परेको म बेहोरुला !
Posted on 01-18-11 2:52 PM [Snapshot: 1468] Reply [Subscribe]
Rahulbhai ko katha ramro lagyo. A comparison can be made with the present government who is squeezing from the already sqeezed citizens. Nice presentation.
Posted on 01-19-11 12:19 PM [Snapshot: 1626] Reply [Subscribe]
कस्तो राम्रो सत्य कथा , मलाई तेसै भएर धर्म का ठेकेदार हरुमा विश्वाश छैन। तर यो घटना को बेला को समाज शायद तेस्ताइ थ्यो फेरी दुख्ह को बेला मान्छे ले सम्झिनीए पनि भगवान नै हो। सन्सार भरी मान्छे हरु लाई धर्म कमौने भाडो भएको छ.
तितो सत्य लाई राम्रो सँग पस्किनु भएको मा राहुलभाइ लाई नमस्कार छ